बाहिरी रूप - लघुकथा - साप्ताहिक
‘नमस्कार सर ’ कुर्सीबाट जीउ आधा घुमाएर हेरेँ, औंलाका टुप्पाले निधार छोएर जोडिएका हात, झुकेको नजर, मन्द मुस्कान । हाँस्दा देखिएका हिमालझैं उज्याला दन्तपंक्ति । लाग्यो, मरुभूमिमा घण्टौंसम्म आकुलव्याकुल भएर बसेको मलाई कसलै शीतल जल ल्याइदिएको छ । त्यही जलले म आफ्नो आँत भिजाउँदैछु ।
‘म मञ्जरी ! बिदामा थिएँ । सर आउनुभएँछ, यहाँलाई स्वागत छ...!’ यस्तो सद्भाव यहाँ कसैले देखाएकै थिएन । आफू नयाँ, आफ्ना लागि सबै नयाँ । सबै अनौठो दृष्टिले हेर्थे । झुन्ड–झुन्ड भएर कुरा गर्थे । कसैले केही सोध्दैनथे । नजानिँदो पाराले छेड हानिरहेका हुन्थे । मानौं म उनीहरूको भाग खोस्न आएको हुँ । काम गर्नै असहज भैरहेको थियो । कम्प्युटरमा घोत्लिरहँदा ऊ आएकी थिई ।
श्रद्धापूर्वक नमस्कार र मधुर मुस्कान मात्र छोडिन, उसले मेराबारेमा खोजीनीति समेत गरी । कार्यालयको वस्तुस्थिति जानकारी गराई । कर्मचारीहरूका बारेमा बताई । बचेर बस्नुपर्ने मानिसहरूका बारेमा सचेत गराई । भेट भएको दोस्रो दिन झोलाबाट झिकेर स्याउ काटेर ख्वाई । सानो टुक्रा स्याउमा कति प्रेम मिसिएको थियो ? वर्णनै गर्न सक्दिनँ । त्यति मीठो स्वाद अहिलेसम्म पाएकै छैन । तेस्रो दिन चिया खान जाने प्रस्ताव राखी । कार्यालयमा एक साता भैसक्दा पुरुष मित्रले समेत चियाको ‘अफर’ गरेका थिएनन् । मनले स्वीकार गरे पनि अप्ठ्यारो मान्दै समर्थन जनाएँ ।
दिनहरू बित्दै थिए । हरेक दिन उसको नमस्कारको प्रतीक्षा हुन थाल्यो । हाम्रो अलग–अलग दिन बिदा हुँदा सातामा पाँच दिन भेट हुने भएकाले बिदा एकै दिन बनाइयो । उसले मेरो ‘आन्द्राभुँडी’ थाहा पाई । मैले उसको । आफ्नो कमाइ राम्रो नभए पनि पतिले दिएको पैसामा रवाफ देखाउनुपर्ने उसलाई । स्नातकोत्तर तह पढिरहेकी उसलाई भम्र थियो, ‘संसारको सबै ज्ञान ममा छ । ’ म सम्झाउँथँे, ऊ तर्किन्थी ।
उसले मसँग ‘धुतेका’ कुरा विस्तारै अन्य मित्रबाट सुनिन थाले । बल्ल पो बुझेँ, नमस्कारको अर्थ, हातमा लगाइएका जोर बेरुवा औंठी प्रदर्शन गर्नु पो रहेछ । म लोभिएको मुस्कान त व्याधाले मृगको वध गर्न गाएको गीत रहेछ । नजिकिनुको अर्थ आफूलाई संसारमै सबैभन्दा जान्नेछु भन्ने देखाउनु रहेछ । म त बाहिरी रूपमै झुक्किएको पो रहेछु ।